चोर्नै नमिल्ने यो कस्तो साइकल ? — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » समाचारहरु → चोर्नै नमिल्ने यो कस्तो साइकल ?
चोर्नै नमिल्ने यो कस्तो साइकल ?
August 6, 2015३५३ पटक
विश्वमा पहिलोपटक एउटा यस्तो साइकल निर्माण भएको छ जून कसैले चोर्नै सक्दैन । उत्पादकका अनुसार चोर्ने नै हो भने साइकल तोडफोड नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘येर्का’ नाम दिइएको यो साइकल चिलीका तीन युवा आविष्कारकले निर्माण गरेका हुन् । आफ्नो साइकल पटक-पटक चोरी भएर हैरान बनेका २२ वषिर्य क्रिस्टोबल काबेलो, २३ वषिर्य आन्द्रेस रोइ एगर्स र २४ वषिर्य जोस मोन्साल्भले कलेजको पढाई नै छोडेर साइकलको निर्माणमा जुटेका थिए ।
चोरहरुलाई जिल्याउनका लागि साइकललाई एउटा ताल्चाको अवधारणामा बनाइएको छ । साइकललाई कुनै पोल वा खम्बामा अड्याउनुपर्ने हुन्छ । साइकलको डण्डीबीचबाट फुकाल्न मिल्छ । डण्डी फुकालेर साइकललाई पोलभित्र छिराएपछि सिटको डण्डीले कसिसकेपछि कुनै माइका लालले पनि चोर्ने हिम्मत गर्दैन । यसरी साइकललाई ‘लक’ गर्न केवल १० सेकेण्ड लाग्ने न्यूयोर्क पोष्टले जनाएको छ ।
येर्काको वेवसाइटमा लेखिएको छ, ‘तपाईंलाई सुरक्षित महसुस गराउन साइकल लकिङ सिस्टमको विकास गरिएको हो । अब तपाईंलाई एक्स्ट्र लक चाहिँदैन ।’ तीन युवाको समुहलाई चिलीको सरकारले ६४ हजार पाउण्ड सहयोग दिएको थियो । – एजेन्सी